ज्याति मगरलाई बेलायतले प्रवेशाज्ञा दिएन – YesKathmandu.com
बिहीबार २४, मङि्सर २०७२
काठमाडौं, २४ मंसिर । सार्वजनिक कार्यक्रममा अंग प्रर्दशन गरेको आरोप खेप्दै आएकी लोक गायिका तथा मोडल ज्योति मगरलाई बेलायतले प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन अस्वीकार गरेको छ ।
व्रिटिस गोर्खा नेप्लिज काउन्सिल बेलायतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन उनी बेलायत जाने तयारीमा थिइन । तर नेपालस्थित बेलायती दुतावासले उनलाई भिसा दिन इन्कार गरेको छ । काउन्सिलले बेलायतको १३ स्थानमा सांस्कृति कार्यक्रम गर्दैछ ।
ज्यातिले भिसा नपाएपछि आयोजकले इन्दिरा जोशीलाई बोलाएको छ । अव उनले बेलायतका सबै कार्यक्रममा भाग दिने भएकी छिन् । ज्यातिसँग भिसा निवेदन दिएका हास्यकलाकार महेन्द्र बग्दासलाई भने दुतावासले भिसा उपलब्ध गराएको छ ।
Facha hallayera sabthok mil6 vanne le gatilo chot pai6e!!! Bujhis bhalu, j ko pani limit hun6!
Hwa Swaney says:
ध्यानमै डगमगाएपछि योगीले काटे आफ्नो लिंग